Usuku My Pet » 5 Izinto Okufanele Gwema Talking About On A Usuku Lokuqala
Usuku lokuqala kungaba isahluko sokuqala inganekwane, kodwa kungaba futhi inhlekelele inani nje ngoba wathinta i "untouchable" sihloko. Love Ukuthola kubonakala kulula kangaka kumabhayisikobho, kodwa ingabe okufanayo ekuphileni kwangempela? Romance akusho ngaso sonke isikhathi fly ngokushelela, nokuthola umphefumulo wakho akulula ukuba ngamunye wethu. Ngezinye izikhathi kungcono umbuzo yokwazi ukuthi ukulwa ngoba, nendlela yokugwema ukwenza faux pas, ikakhulukazi ngosuku lwakho lokuqala. Nakuba lesi yisikhathi lapho uzama ukuthola izinto eziyisisekelo mayelana nomunye, kungcono kuwe unamathele ephephile izihloko ingxoxo. Nazi ezinye izinto kufanele ugweme ukhuluma ngosuku lwakho lokuqala:
Akekho uthi imibono yakho yezombusazwe azibalulekile, kodwa ngokuqinisekile musa ukwenza ingxoxo ngesihloko ephephile usuku lokuqala. Ukuletha kwezombusazwe kungenzeka nje ukudala isimo kwase kunobutha, futhi lokhu akuyona okufunayo. Anyway, ngeke wenze republic abe amaSheshi Democrat noma vice ... okungenani hhayi kuleli zinga ubuhlobo bakho at.
Uma ungeyena teenager, kakhulu Ngokuqinisekile ezinye ubudlelwano ehluleka iphothifoliyo yakho, futhi lokhu ngokuphelele emihle. Everybody akwenzayo. Kungakhathaliseki ukuthi unayo ithini ex yakho / exes, usuku lokuqala akusona isikhathi esifanele ingxoxo enjalo. Ingabe wayeqaphe a bitch elilawulayo? Ingabe yena a kunyakaza inani? Lokhu akuyona into ofuna ukumtshela othile oye wambona nje njengoba / angase acabange wena akukho okunye kodwa umphefumulo ebabayo. Uma ngakolunye uhlangothi, une amazwi ezinkulu kuphela ukusho ngabo, ungase ushiye umqondo awuzange uthole phezu kwabo, futhi awuyona, Ngakho, silungele ukuqala ubuhlobo. Uma usuku lwakho ezama ukuthola ukuthi kungani wena bahlukana nge ex yakho, anikeze impendulo ezingacacile ukuthi alinawo sisole noma simthande.
Esedlule Your akunjalo ahlanzekile
Cleaner noma dirtier, sonke sibe esidlule, futhi lokhu akusho ukuthi akuzona unelungelo ukuthola uthando. Nokho, lokhu akusho ukuthi kufanele siqhoshe misshapes esikhathini esidlule ngosuku lwakho lokuqala. Uyoba sokuba uzibike ngabanye balabo izinto okungenani esithile kusaqalwa ubuhlobo bakho, kodwa awunayo okwesabisa usuku lwakho kude ngqá uhlangana.
Clock bakho abakuzalayo
Njengoba isikhathi siqhubeka, abesifazane ikakhulukazi, kodwa futhi amadoda aqale ukuzwa clock oyizalayo kuboniswe ngophawu. You got kuleyo nkathi lapho ufuna ukuqala umndeni futhi ukuba izingane, kodwa kungcono kuwe okokuqala ukuthola umlingani esifanele. Ungafaki inqola phambi ihhashi!
Isikhundla Your ozithandayo ngokocansi
Kungakhathaliseki ukuthi uphendulela wena futhi lokho ziyakujabulela ukwenza in embhedeni, akusiyo into yokuqala ufuna usuku lwakho ukuze uthole ngawe. Ngokufanayo, lokhu akuyona into ebaluleke kunazo ufuna ukwazi ngomuntu ocabangela umlingani. Linda uze uyifinyelele ezingeni lelifanele ukusondelana ukukhuluma ngalezi zinto.